Rikoodhkoodii iyo Raad Raacii Madaxweyneyaashii kala danbeeyey ee soo maray Somaliland. Qalinkii A/rahman fidhinle UK‏ July 21, 2015 | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Rikoodhkoodii iyo Raad Raacii Madaxweyneyaashii kala danbeeyey ee soo maray Somaliland. Qalinkii...
Rikoodhkoodii iyo Raad Raacii Madaxweyneyaashii kala danbeeyey ee soo maray Somaliland. Qalinkii A/rahman fidhinle UK‏ July 21, 2015
Madaxweynayaashii Somaliland soo marey waxaa mid walba lagu xusuustaa raad raaciisa hogaamineed, karaamadiisa shaqsiyeed iyo wax qabadkiisii ugaarka ahaa. Madaxweynihii ugu horeeyey ee Somaliland Mudane A/rahman Ahmed Ali naxariistii jano alleh ha ka waraabiyee mudadii uu wadanka Hogaaminaayey wuxuu ahaa waqti aad u-adag oo kala danbeyntu yareyd oo hubka lawada haystey laakiin wuxuu ku guuleystey in aanu Magaca iyo milgaha Somaliland aaney gacamihiisa ku bur-burin waana uu ku guuleystey oo wuxuu ku wareejiyey Madaxweyne Cigaal.
Madaxweynihii labaad ee Somaliland soo marey wuxuu ahaa Alleh haw-naxasiistee Mohamed Xaji-Ibrahim Cigaal, naxriistii jano Alleh ha-ka waraabiyee waxaa uu ahaa Siyaasi ruug cadaa ah, Wuxuu ahaa aas aasihii dhidibada utaagey hanaankii dawladeed iyo geedi socodka dimuqraadiga ah ee maanta Somaliland ku fadhido. Wuxuu bud-dhigay sadexda Dhar-dhaar ee dawaladnimadu Somaliland maata ku fadhido oo kala ah Wakiilada, Fulinta iyo Garsoorka, Madaxweyne Cigaal waxaa la isku raacey in uu ahaa Madaxweyne Qowmiyadeed ee aanu aheyn madaxweyne Qabiil.
Madaxweynihii sadexaad ee Somaliland soo maraa wuxuu ahaa Mudane Daahir Riyaale Kaahin waana maxadweynihii ku guuleystey fulintii sii amba qaadkii dariiqii hanaankii dimuqraadiga ahaa ee madaxweyne Cigaal uu u jeexay Somaliland. Wuxuu Mudane Riyaale fuliyey in qaranka Somaliland uu ku dhaqmo mabaadiida siyaasadeed ee xisbiyada badan isaga oo ku guuleystey hirgelintii doorashooyinkii badnaa ee kala danbeeyey ee Somaliland caalamku ku amaaney. Waxaa Riyaale lagu xusuusan doona sidii geesinimada laheyd ee uu maamulka Somaliland u-fidiyey iyo sidii uu u sugay dhamaan nabadgelyadii guud ee Somaliland. Waxaa lagu xusuusan doona sidii uu isugu lingaxay ee uu burcadka isugu mariyey beelaha walaalaha ah ee Somaliland wada dega. Madaxweyne Riyaale si uu ictiraaf buuxa u raadiyo wuxuu la kulmay 10 Madaxweyne oo African ah sida Hogaamiyaasha, Eithoipia, Rwanda, Ugandha, Tansaniya, Zambiya, Gaana, Naijeria, Togo, Kenya iyo South Africa iyo hogaamiye yaasha America iyo ingiriiska.
Madaxweynihii afraad ee Somaliland waa Madaxweyne Ahmed Mohamed Mohamoud Siilaanyo. Madaxweyne Siilaanyo wuxuu noqday Madaxweynihii Somaliland soo mara kii uguna nasiibka badnaa uguna nasiibka xumaa.Wuxuu ahaa Madaxweynihii ugu nasiibka badnaa oo waxaa mudane Daahir Riyaale Kaahin uu ku wareejiyey wadan degan oo nab doon oo ubaahnaa uun in la dhaqaajiyo oo gibisha loo xidho dimuqraadigii socod baradka ahaa iyo hayadihiisii dawladeed. Laakiin nasiibdaro wuxuu noqdey kii ugu nasiibka darnaa ee Somaliland soo mara ka dib markii uu hintaaqiyey ee uu wiiqey lugihii Jilicsanaa ee uu ku taagnaa dimuqraadigii curdinka ahaa ee Somaliland ku taamaysay mudada dheer. Madaxweyne Siilaanyo waxaa shacabka reer Somaliland ay qireen in uu noqdey Madaxweyne qabiil oo qabyaaladii dib u soo celiyey oo muu noqon madaxweyne Qomiyadeed. waxaana aan gun dhig laygu garaabo uga dhigayaa siduu ka yeelay ilihii dhaqaalaha ee dalka, manfacii, qandaraasyadii, dantii guud,mansabkii, magantii, mooradii iyo keydkii iyo collective asset kii dalka oo dhan oo uu kawada yeelay weecsin iyo beegsin oo uu ku gufeeyey beelo gaar ah iyo shaqsiyaad gaar ah muskood iyo misxirirtood.
Madaxweyne Siilaanyo muu uxaqsoorin shacabkii doortey ee dirtey , wuxuuna noqdey Madaxweyne dhinac u ciiray oo aan ummadda umuujin sinaan iyo cadaalad,taas oo ay xukuumadiisuna ay isku khaladey runtii iyo beentii, Doorashadii iyo Diiwaangelintii,fariidkii iyo nacaskii , mujaahidkii iyo faqashtii, daneystihii iyo daryeelihii, fashilaadii iyo guushii, qoyskii iyo qarankii, guurtidii iyo komishankii, xisbiyadii iyo xoghayntii, fulintii iyo Wakiiladii. Xukuumada Siilaanyo Waxay isku xeertey duul qaldhabaaya oo qawdhamaaya oo aad moodo in aaney wadankaba udhalan oo eryanaaya uun dano gaar ah, magac aaney mudneyn, maal aaney xoogsan,maa muus aaney kasban, shaqsi jecleysi raadinaaya uun xukun dheeraad ah iyo xoolo aan bireysneyn oo booli ah. Wuxuu isku xeeray duul aan hadal umeel dayeyn kuwaas oo isku khalda xogta iyo xaqiiqda maanta Somaliland taala. wuxuu isku xeeray duul heerkula qabyaaladeed uu meel xun gaadhay kuwaas oo shaqaalahoodii iyo shacabkiiba ku dhextuuray xin, xiqdi iyo xajiin qabali ah. Wuxuu isku xeeray duul garaad gaaban oo aan kala aqoon hantida qaranka, awooda qaranka iyo shuruucda qaranka (Dastuurka iyo Xeerar kiisa )
Nasiib-daro Maanta waxay hantidii maguuraanka aheyd ee ummadda Somaliland oo dhan udhaxeysey ay gacanta ugashey koox yar oo dhereg dhaaftey oo aan danahooda mooyaane aan aqoon daryeel kale oo dhaafsiisan. Madaxweyne Siilaanyo wuxuu Ribo iyo Ra’iis ugu balan qaadey hawl-wadeenadii ugu sareeyey sharci dejinta dalka taa soo aheyd goobtii lagu abuuraayey, laguna ansixinaayey, laguna meel-marinaayey sharciyada uu soo curiyo isagu. Hadaba maadaama meel marinta qawaaniinta distooriga ah ee Somaliland ay had iyo jeer ku dhacaan qaab gacan taag ah, waxaa halkaa ku sarifmey oo ku milmey oo ku fasaqmey oo uu Virus ku galey haykalkii dawladnimo, Doorashooyinkii, higsigii iyo habsami u-socodkii hawlihii qaranimo.Waxaana meesha ka baxdey xilgudashadii, isxisaabintii, dhiirigelintii hanaankii dimuqraadiyeed , maslaxadii, maamuuskii iyo masiirkii guud ee ummadda Somaliland. Bal-hadaba Muwaadinow, Sideebay wax u kala soconayaan mar hadii xukuumadii seegtey tubtii toosneyd oo ay turun-turootey oo ay taraartey waqtigeediina uu dhamaaday ? Bal waa yaabe yaa tilmaa-maaya oo ku toosi naaya Toobiyaha toosan ?? Jawaabta oo koobani waa cidna ee yaaney ku jiidhin!!
La soco qormooyinka danbe——————————–!!!!!!
Alleh ayaa mahada iyo Mudnaantaba Leh.
Qoraa Madax banaab
Intensive ED.BD PA
Previous articleWAA YAABKA YAABKIIS MA INA WARAN CADE,INA FADAL IYO INA CADARE AYAA ABAYASHII SNM EE XASAN CIISE,MAHD XAASHI,IBRIM DHAGAWEYNE,BOOBE YUSUF KA ILAALINAYA SOMALIND INEY QASAAN!!!!!!????.‏
Next articleSiilaanyo wuxuu cadaystay in uu Xoog iyo Xeelad dalka iyo dadkaba ku haysto maadaama uu digreeto ku cayimi waayey waqtigii doorashooyinka la qaban lahaa.Bal u fiirsada fadeexadahan hoose!. Qalinkii A/rahman fidhinle UK‏